Sidee ayey u muuqanaysaa shaxda kooxda Barcelona kulanka ay Inter Milan ku soo dhoweynayso Camp Nou ee Champions League? – Gool FM
(Barcelona) 30 Sebt 2019. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa soo dhoweynaysa naadiga reer Talyaani ee Inter Milan iyadoo ku soo dhoweynaysa Arbacada habeenkeeda, iyadoo raadinaysa guusheedii ugu horreysay Champions League ee xilli ciyaareedkan.
Kooxda uu hoggaamiyo macallin Ernesto Valverde ayaa kulankeedii furitaanka Guruubka F waxa ay booqdeen Borussia Dortmund, iyadoo la soo galay barbaro goolal la’aan ah, laakiin waxa ay ogyihiin haddii ay dhibco ku lumiyaan garoonkooda inay xaaladda Guruubkan ay ka dhigi karto mid adag.
Inter Milan oo guulo xiriir ah ku raaxaysanaysa isla markaana hoggaanka u haysa horyaalka Serie A kaddib lix kulan oo ay ciyaartay oo ay lixda kulanba guulo gaartay ayaa dhankeeda waxa ay kulankeedii furitaanka Champions League waxa ay barbaro 1-1 ah la gashay Slavia Prague.
Barca waxaa dhaawac uga maqnaanaya kulankan Ansu Fati oo jilibka ka dhaawacan iyo Samuel Umtiti oo cagta dhaawac ka qaba.
Waxaa kooxda ka dhisan Spain kulankan shaki laga galinayaa Lionel Messi, Ousmane Dembele iyo Jordi Alba oo dhaawacyo muqura ah sheeganaya.
Haddaba halkaan hoose ka eeg sida ay u muuqan karto shaxda kooxda Barcelona ay kala hortagayso naadiga Inter Milan:-